कपाल झर्ने कारण – Health Post Nepal
कपाल झर्ने कारण
२०७५ भदौ ८ गते ३:४५
सवाल : म कपाल झर्ने समस्याले पीडित छु । १९ वर्ष भएँ, घरमा विवाह गर्ने कुरा पनि चलिरहेको छ । कपाल झरेकै कारणले मलाई निकै तनाव भइरहेको छ । अझै टाउकोअगाडिको भाग (तालु)मा अझै बढी उखेलेजसरी नै झरिरहेको छ । अन्य जाँच गर्दा केही समस्या देखिन्न । सुरुमा एकपटक रजस्वला भएपछि २ वर्षसम्म रोकिएर पुनः सुरु भएको थियो । यो त कारण हैन ?
डा. अनुपमा कार्की छाला तथा यौनरोग विशेषज्ञ, वीर अस्पताल
समाधान : डा. अनुपमा कार्की वीर अस्पताल
कपाल झर्ने धेरै कारण हुन्छन्, बाह्य र भित्री कारण । भित्री कारणमा हर्मोन एउटा प्रमुख हो । त्यसबाहेक हेयर ड्राई गर्दा केमिकलको प्रयोग भएको थियो भने पनि कपाल झर्न सक्छ । थाइराइड हर्मोनमा गडबडी भएको छ भने कपालमा पातलोपना आउँछ । रगतमा आइरन, हेमोग्लोबिनको कमी भए पनि कपाल झर्छ । त्यसैगरी, नियमित रूपमा तातोपानीले नुहाउनाले पनि कपाल झर्न सक्छ । तपाईंले प्रस्टसँग भन्नुभएको छैन तर कुनै ठूलो शल्यक्रिया गर्नुभएको थियो वा बढी तनाव लिएको कारणले पनि कपाल झर्न सक्छ ।
कपाल झर्नबाट बचाउन यसको राम्ररी स्याहार गर्नुपर्छ । कपालको चिल्लोपनलाई जोगाइराख्न समय–समयमा तेल लगाइरहनुपर्छ । कपाललाई धेरै मैलो बनाएर राख्नु हुन्न । राम्रो स्याम्पुको प्रयोग गर्नुपर्छ । तपाईंको समस्या बनाएको सुन्दा यो प्याट्रन हेयर लसजस्तो देखिन्छ । यसमा विचार गर्नुपर्ने कुरा भनेको महिलामा पनि एकदमै न्यून मात्रामा पुरुषमा हुने एन्ड्रोजेन नामक हर्मोन हुन्छ । यो हर्मोन बढी सेन्सेटिभ भयो भने लामो कपाल पुरुषकै जस्तो सानो–सानो हुन्छ र लामो कपाल झर्दै जान्छ । निधारको माथि सिउँदोतर्फ कपाल झर्दै जान्छ । यो हर्मोनकै कारण भएको रहेछ भने कपाल झर्न रोक्न सकिन्न ।
यसबाहेक कपाल झर्ने साझा कारण भनेको चायाको समस्या हो । अर्को कारण कपाल ठाउँठाउँमा चक्का–चक्का बनेर पनि झर्छ । तपाईंले तत्कालै एकजना यौन तथा चर्म रोग विशेषज्ञसँग भेटेर जाँच तथा परामर्शबाट अघि बढ्नुपर्छ । तपाईंले शंका गर्नुभएजस्तो महिनावारीसँग सम्बन्धित कारणले भने कपाल झर्दैन ।
सवालमा [email protected] मा पठाउनुहोला ।
सवाल / समाधान